Ireo mpamatsy famandrihana mivantana dia hanana 'varavarankely fanararaotana' amin'ny diany aorian'ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Ireo mpamatsy famandrihana mivantana dia hanana 'varavarankely fanararaotana' amin'ny diany aorian'ny COVID-19
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ireo mpitsangatsangana an-tserasera (OTA) no safidy voalohany amin'ny fantsom-pifandraisana ho an'ny * 44% amin'ireo mpamaly manerantany tamin'ny Q3 2019, hoy ny manam-pahaizana momba ny angona sy ny fanadihadiana. Na izany aza, ny politikan'ny famerenam-bola miady hevitra, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny serivisy ho an'ny mpanjifa mahomby, dia manome fotoana ho an'ireo mpanome tolotra serivisy hanamafisana ny famandrihana mivantana amin'ny dia lavitra aorian'ny pandemika.
Ny OTA dia manjaka amin'ny habaky ny tsena fitsangatsanganana an-tserasera, fa ny tsy fisian'ny politikam-bola mahomby amin'ny fametahana vola no iray amin'ireo sehatra lehibe indrindra atahorana mandritra Covid-19. Ny fizotry ny famerenana amin'ny laoniny ny mpanjifa amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo dia sarotra kokoa noho ny rehefa namandrika mivantana - manome ny hotely sy ny kaompaniam-pitaterana an-tanana 'ambony-tanana' amin'ny fanompoana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ity areti-mifindra ity.
Misy faniriana mafy ny vokatra / serivisy mifanaraka amin'ny fotoana sy ny vola teritery satria 82% ny mpandeha dia 'foana', 'matetika' ary 'somary' voataonan'ireo lafin-javatra ireo. Raha resaka serivisy manokana, ** 80% dia 'foana', 'matetika' ary 'somary' voataonan'io. Ny OTA dia tsy azo tratrarina tsy ho ela, na izany aza, ireo mpanome tolotra manana fampiasa amin'ny haino aman-jery sosialy matanjaka, ary mora ampiasaina amin'ny sehatra an-tserasera sy ny fampiharana fitsangatsanganana, dia afaka manatsara kokoa ny tolotra sy serivisy ho an'ny mpandeha ankehitriny, amin'izay mamela azy ireo hitrandraka. ity 'varavarankely fanararaotana' ity.
Talohan'ny COVID-19, * 44% amin'ireo mpandeha manerantany dia namandrika tamin'ny OTA. Kely dia kely ny famandrihana mivantana miaraka amin'ny 36% famandrihana matetika miaraka amin'ny mpanome trano fandraisam-bahiny ary 32% mivantana amin'ny kaompaniam-pitaterana iray. Na izany aza, ny COVID-19 dia toa niova fihetsika. Rehefa manao famandrihana mivantana izy ireo, dia mety hahita mpanjifa tsara kokoa ny mpanjifa, safidy malalaka sy famerenam-bola kokoa miaraka amin'ny vidiny mirary kokoa.
Matetika ireo mpizaha tany dia manao famandrihana miaraka amin'ny OTA mba hahitana ny fifanarahana mahomby indrindra satria ny sehatra an-tserasera dia manolotra safidy maro isan-karazany rehefa misafidy toerana honenana, sidina ary traikefa amin'ny toerana itodiana. Na izany aza, COVID-19 dia nanasongadina andianà olana ao anatin'ny rafitry ny OTA satria ny adin'ny mpanjifa amin'ny famerenam-bola sy ny haavon'ny asa fanompoana mpanjifa mampiahiahy. Niteraka fahasimban'ny marika OTA izany, izay nisy fiatraikany tamin'ny fifandraisana sy ny mpanjifa na ny mpamatsy.
Ireo mpanome tolotra izay matetika miara-miasa amin'ny OTA dia tokony hanararaotra izany fotoana izany ary hampirisika ireo mpizahatany hanao famandrihana mivantana. Ny famoronana rindran-dia dia hanolotra mpamatsy famandrihana mivantana fotoana iray hampitomboana ny haavon'ny personalization amin'ny alàlan'ny famakafakana ny angon-drakitra am-pahombiazana kokoa sy amin'ny fanokafana ny lalana ho an'ireo tolo-kevitra namboarina kokoa. Mety hitarika fahafaham-po amin'ny mpanjifa izany; tolotra ahazoana tombony manoloana ny fihoaram-pefy amin'ny filan'ny dia ataon'ny COVID-19.
* Q3 2019 Fanadihadiana momba ny mpanjifa manerantany - valiny 29,744
** Fanadihadiana farany ho an'ny mpanjifa COVID-19 (4 - 8 Nov 2020) - valiny 5,820 XNUMX